Home Wararka Ceebta Siyaasadeed ee Caawa Farmajo ku dhacday waa Dhaawac weyn Ma iska...
Ceebta Siyaasadeed ee Caawa Farmajo ku dhacday waa Dhaawac weyn Ma iska Dhaqaaqi doonaa?
Waa markii ugu hoorreysay taariikhda Dalka Somaliya shakshi sheeganaya inuu yahay madaxwynihii dalka sida Farmajo oo isagoo soo taagan aan haddana waxba laga weydiineyn dalka taladiisa. Waa weji gabax, ceeb iyo sharfdhac cidla kugu heshay adigoo isu haysta odaygii reerka oo aan haddana wax tala ah ku lahayn reerka.
Farmajo hadduu damiir dadnimo, caqli qof weyn, garasho qaagaarnimo iyo tashi rageed leeyahay caawa waxaa la gudboon inuu iska tago, waayo waxaa hortiisa looga tashaday sidii dalka doorasho uu diidan yahay loogu qaban lahaa si isaga talada looga wareejiyo.
Maanta waxaa la soo saaray jadwalkii doorashada oo aan Farmajo waxba laga weydiineyn, waxaana loo dhaqangelinayaa sida ugu dhakhsaha badan. RW Rooble oo runtii amaan mudan iyo Madaxda dowlad Goboleedyada ayaa isla gartay in dalka doorasho la geliyo wayeelka qaawanna uu Villada iska joogo.
Waxaa guddi loo saaray in la xalliyo xaaladda Gedo oo uu dhibaato badan ku hayay, waxaana la filayaa inay ka kenaan jawaab lagu farxo inkasta oo uu Farmajo falfal xun yahay oo ay dhici karto inuu ku dadaalo inuu wwax kala daadiyo. Hasa yeeshee waxay u egtahay inaan loo joojineyn oo ay Khasab tahay in dadka reer Gado laga dulqaado daruuraha colaadeed ee uu Farmajo dul dhigay.
Isku soo duub waxaa la jira rag labaa ugu xun, nin maqan oo aan la tabin iyo nin tagaya oo aan la celin waxaansa maanta ku dareynaa mid joogoo aan talo la weydiin, waana sida Farmajo oo aan caawa cidi wax weyndiineyn waayo haddii la weydiiyo waxaa la hubaa inaysan afkiisa wax kheyr leh ka soo baxayn. Sidaas dared waxaa mahad aan la soo koobi Karin mudan kooxda ka tashatay oo dalka ka badbaadiyey haba ku kala horrreeyaane.
Jadwalkan halkaan hoose ka dayo.
Waxaasa weli yaab leh in uu weli Farmajo ka fekarayo inuu soo noqdo oo mar kale la soo doorto. Waa maqane Jooge Ma Madaxweyne jooga oo haddana maqan oo nan la tabeyn wax ka xun oo qof weyn u suubata ma naqaano. Tolow weli ma jiraan dareenkii indho la’aaneed iyo khudbaddii loo soo qoray ee beenta ahayd Soomalida Ma doorman doontaa mar kale Madaxweyne maqane jooge ah?